အန္တရာယ်အများဆုံး ကမ်းခြေများ - Shwe Khit Online TV
June 3, 2020 Bo Bo Amazing 0
ပင်လယ်ကမ်းခြေလိုနေရာမျိုးဆိုတာကတော့ ချစ်သူ၊ အပေါင်းအသင်း၊ မိသားစုတွေအတွက် အကောင်းဆုံးနဲ့ အသာယာဆုံး အပန်းဖြေစရာနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအမြင်ကမှားတယ်ဆိုတာကို အောက်မှာဖော်ပြမယ့် ကမ်းခြေတွေအကြောင်းကို ဖတ်ရှုပြီး သင့်အနေနဲ့ လက်ခံသွားမယ်ဆိုတာ အာမခံပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၅။ Chowpatty Beach – Toxicity At Its Peak ( အိန္ဒိယ )
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မွန်ဘိုင်းမှာရှိတဲ့ (Chowpatty) ကမ်းခြေကတော့ နိုင်ငံအတွင် အဆိပ်သင့်မှု အများဆုံးကမ်းခြေအဖြစ် နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားပါတယ်။ ကမ်းခြေရဲ့တစ်ချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် အမှိုက်သရိုက်တွေနဲ့ မိလ္လာရေဆိုးရေညစ်တွေကို ထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရတက်ပါတယ်။ ဘယ်သူမဆိုကမ်းခြေကို အပမ်းဖြေခရီးထွက်ရာကနေ အိမ်ကို နေမကောင်းဖြစ်ပြီးပြန်ချင်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒါဆိုရင်တော့ ဒီလိုကမ်းခြေမျိုးကို ရှောင်ရှားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ shwekhitonlinetv.com
၄။ Kileua Beach – Warning , Hot Water Ahead (မက္ကဆီကို)
အနက်ရောင်သဲမြေတွေနဲ့ Kileaua ကမ်းခြေကတော့ အပေါ်ယံသွင်ပြင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သာယာလှပတဲ့ ကမ်းခြေတစ်ခုလို့မှတ်ယူနိုင်ပေမယ့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၃၅) နှစ်လောက်ကတည်းက အဆက်မပြတ်ပေါက်ကွဲနေတဲ့ မီးတောင်တစ်ခုကြောင့် ရေထဲကို ချော်ရည်တွေကစီးဝင် လျက်ရှိပါတယ်။ ရေရဲ့အပူချိန်ဟာ (၁၀၀) ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်ထိမြင့်မားနေတက်ပြီး ဆောင်းရာသီမှာသွားရောက်မယ်ဆိုရင်တောင် အဆင်မပြေဘူးလို့သိရပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
၃။ Playa Zipolite – Fatal Tides (မက္ကဆီကို)
Playa Zipolite ဆိုတာကတော့ မက္ကဆီကို နိုင်ငံအတွင်းက ဝတ်လစ်စလစ်ကမ်းခြေတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့အန္တရာယ်အရှိဆုံးကမ်းခြေတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့ကလည်း “လူသေတွေရဲ့ သဲသောင်ပြင်” လို့ အမည်ပေးထားပါတယ်။ ဒီကမ်းခြေကို ရိုက်ခတ်တဲ့ ရေလှိုင်းတွေက ကမ်းခြေကိုရိုက်ခတ်ပြီး ရေနက်ထဲကို ပြန်လည်ဆွဲချသွားတက်တဲ့ သဘောရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေကူးမကျွမ်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ရေထဲမဆင်းဘဲ အတော်အသင့် နေပူစာလှုံပြီးတော့သာ အိမ်ပြန်ကြဖို့ အကြံပြုပါရစေ။ shwekhitonlinetv.com
၂။ Gansbaai – Home Of Sharks (တောင်အာဖရိက)
သင့်အနေနဲ့ ‘Jaws’ , ‘Deep Blue Sea’ စတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ဖူးပါသလား ? တကယ်လို့ ကြည့်ဖူးမယ်ဆိုရင်တော့ ငါးမန်းတွေက ဘယ်လောက်ကြောက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာကို အသေးစိတ်ပြောပြနေဖို့ လိုမယ်မထင်ပါဘူး။ ဒီနေရာမှာတော့ ငါးမန်းတွေအများအပြားရှိနေပြီး သူတို့ပိုင်နက်ထဲ ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ အချိန်အများကြီးယူနေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလို ငါးမန်းတွေပေါများလွန်းတဲ့ ကမ်းခြေမျိုးမှာ ရေကူးချင်တယ်ဆိုရင်တော့လည်း …… shwekhitonlinetv.com
၁။ Amazon River Beaches – The Deadly Trap (ဘရာဇီးလ်)
အမေဇုန်တောဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကအကြမ်းတမ်းဆုံး ရေမြေသဘာဝရှိတဲ့ နေရာဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Amzcon River Beaches မှာဆိုရင်တော့ ကြမ်းတမ်းလွန်းတဲ့ သဘာဝတရားကြောင့် တစ်ချို့ရဲရင့်တဲ့ စွန့်စားရှာဖွေသူတွေရဲ့ ဝိညာဉ်တွေတောင် အဲ့ဒီနေရာမှာ ချုပ်ငြိမ်းခဲ့ရဖူးပါတယ်။ အန္တရာယ်အရှိဆုံးကတော့ ဗို့အားပြင်းလျှပ်စစ်ဓာတ်တွေထုတ်တက်တဲ့ (Electric Eels)၊ အခြားသတ္တဝါတွေကို အရှင်လတ်လတ်ဝိုင်းအုံတိုက်ခိုက်တက်တဲ့ (Piranhas) လို့ခေါ်တဲ့ အသားစားငါးငယ်တွေနဲ့ (Anacondas) လို့ခေါ်တဲ့ဧရာမမြွေကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီကမ်းခြေက ကမ္ဘာပေါ်မှာလူအသေအပျောက်အများဆုံးကမ်းခြေအဖြစ် စာရင်းဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ shwekhitonlinetv.com
ကဲ …. အခုလောက်ဆိုရင်တော့ ရွှေခေတ်ပရိသတ်ကြီးလည်း ကမ်းခြေတိုင်းက ပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှာ မဟုတ်တာကို သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့နော် …. နောက်ထပ်လည်း ဒီထက်ပိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေကို ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ် ဆိုတာ အသိပေးရင်း …………… shwekhitonlinetv.com
ခွေး၊ ကြောင်လေးတွေကို သေစေနိုင်တဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်က အရာများ
၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းမှာ လုံးဝ ပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တဲ့ အရာများ